Hello Nepal News » सेभिल्लासँग कोम्यानलाई एउटै कुराको डर : खेलअघि के–के भने ?
सेभिल्लासँग कोम्यानलाई एउटै कुराको डर : खेलअघि के–के भने ?
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा भोलि बार्सिलोनाले लिगको तेस्रो खेलका रूपमा सेभिल्लासँग खेल्दै छ । सो खेलका लागि बार्सिलोनाले लिगको अर्को बलियो टोली सेभिल्लालाई आफ्नो घरेलु मैदानमा स्वागत गर्दैछ । बार्सिलोना र सेभिल्ला दुवै टोलीका लागि यो खेल यस सिजनकै पहिलो ठूलो खेल हुनेछ ।
बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानका लागि यो खेल पहिलो परीक्षा हुनेछ । उनी नयाँ प्रशिक्षकका रूपमा बार्सिलोनालाई लिगकै एक मजबुत टोलीविरुद्ध आफ्ना खेलाडी उतार्दैछन् । यसअघि बार्सिलोनाले पहिलो खेलमा भिल्लारियलाई घरमा ४–० र त्यसपछि सेल्टा भिगोलाई उसकै घरमा ०–३ हराएको थियो । तर, बार्सिलोनाका लागि सेभिल्ला अघिल्ला दुई टोलीभन्दा कठिन टोली हो ।
बार्सिलोना र सेभिल्ला दुवैले सुरुआत २ खेल जितेर शतप्रशित ६ अंक जोडेका छन् । सेभिल्ला भोलि बार्सिलोनालाई उसकै घरेलु मैदानमा हराएर विजयी यात्रा कायमै राख्ने दाउमा हुनेछ । जुलेन लोपेटेगुईको नेतृत्वमा रहेको सेभिल्ला पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा छ ।
बार्सिलोनाका प्रशिक्षक कोम्यानले प्रि–म्याच कन्फ्रेन्समा सहभागी हुँदै आफ्नो धारणा राखेका छन् । सोक्रममा उनले सेभिल्लासँगको खेल नयाँ सिजनको तयारी कस्तो छ भनेर थाहा पाउने पहिलो परीक्षा हुने बताएका छन् । ‘नयाँ सिजनका लागि हामी कति तयार छौं भनेर थाहा पाउन सेभिल्लासँगको खेल पहिलो परीक्षा हुनेछ । किनभने, सेभिल्ला एक मजबुत टोली हो । उनीहरू गत सिजनको युरोपा लिग च्याम्पियन हुन् । मलाई थाहा छ, उनीहरू अहिले उच्च स्तरको फुटबल खेलिरहेका छन्,’ कोम्यानले भनेका छन् ।
कोम्यानले बार्सिलोना सही दिशा र लयमा छ भनेर देखाउन सेभिल्लालाई हराउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले जसरी सुरुका २ खेलमा सहज नतिजा निकाल्यौं । हामी त्यही गतिमा अघि बढ्न तयार छौं भनेर देखाउन हामीलाई सेभिल्लाविरुद्ध राम्रो नतिजा चाहिन्छ । हामी हरेक खेल जित्न चाहन्छौं । मलाई लाग्छ, हामी अहिले उच्च आत्मविश्वास र गतिमा छौं,’ कोम्यानले थपे ।
कोम्यानले क्याम्प नोउमा सेभिल्लाविरुद्ध उत्रिँदा उनीहरूको पछिल्लो समयको आत्मविश्वास आफूहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक हुनसक्ने बताए । ‘भोलि सेभिल्लाको पछिल्लो समयको आत्मविश्वास हाम्रा लागि सबैभन्दा खतरनाक हुनसक्छ । मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु कि, उनीहरू अहिले कसरी खेलिरहेका छन् । तर, हामी आफ्नो घरमा बिनादबाब खेल्नुपर्छ । र, त्यहाँ कुनै गल्ती गर्नु हुँदैन,’ कोम्यानले थपे ।
कोम्यानले सेभिल्लाविरुद्ध पनि युवा स्टार अन्सु फाती आफ्नो फर्मेसनमा पर्ने बताए । ‘उनले साँच्चै राम्रो सुरुआत गरेका छन् । उनको बारेमा मैले यसअघि नै धेरै कुरा भनिसकेको छु । उनी १७ वर्षका मात्रै छन् । तर, हाम्रा लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण खेलाडी । उनी हरेक खेलका लागि खुला हुनेछन् । अवश्य पनि, सेभिल्लाविरुद्ध उनी प्राथमिकतामा हुनेछन्,’ कोम्यानले थपे ।
बार्सिलोना र सेभिल्ला दुवैले सुरुआतका दुवै खेल जितेर समान ६–६ अंक जोडेका छन् । तर, गोलअन्तरमा आधारमा बार्सिलोना सेभिल्लाभन्दा एक स्थान माथि छ ।
प्रकाशित मिति १७ आश्विन २०७७, शनिबार १२:३८